गुरुबा / गुरुआमा | EduKhabar
भक्तपुर - नाकको दुई पोरामा पाइप घुसारिएको छ । कोठाको एक कुनाबाट आइरहेको अक्सिजनको पाइपलाई टाउकोको पछाडि, कानको माथिबाट ल्याइ नाकका प्वालमा छिराएर सजिलोका साथ बसिरहेका छन्, ताथलीका ध्रुब खत्री ।...
म २०६४ सालमा अस्थायी शिक्षक भएको हुँ । त्यसपछि आयोग खुलेन, एकपटक २०७१ म खुल्यो, २०७१ म पनि मेरिट बेसिसमा खुल्यो । चारवटा पदका लागि ५ सय जनाबीच प्रतिस्पर्धा गराएर आयोगले नमिल्ने काम गरिरहेको छ । शिक्ष...
ललितपुर - नीलप्रसाद दुलाल शिक्षक भएको बेला अहिलेको जस्तो अवस्था थिएन अर्थात्, एसएलसी पास गरेका मान्छेहरु नै कम थिए । यही कारण पनि ४० को दशकमा एउटा विद्यालयले शिक्षक पाउनु पनि गा¥हो कुरा थियो । अझ...
कपिलवस्तु – पाटन संयुक्त क्याम्पस ललितपुरका अंग्रेजी विषयका प्राध्यापक खेमराज खनालले आफ्ना दुई सन्तान राजधानीका गुणस्तरीय दावी गर्ने निजी विद्यालयमा पढाउन चाहेनन् । गृह जिल्ला कपिलवस्तुको जनता उ...
–ओडराज अधिकारी, ताप्लेजुङ / ‘मेरो हजुरबुवा (धर्मानन्द), बुवा (टीकाप्रसाद) र काकाहरु पनि शिक्षक नै हुनुहुन्थ्यो । ५/६ कक्षा पढ्दादेखि नै शिक्षण पेशाप्रति नजानिँदो तवरले म आर्कर्षित भएँ । हजुरबुवाले गाउ...
- होमबहादुर अधिकारी पूर्व प्रधानाध्यापक, जनज्योति उमावि धुपु, संखवासभा ३२ वर्ष शिक्षण पेशामा बिताएका संखुवासभा धुपुस्थित जनज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक होमबहादुर अधिकारी यति...
- विष्णु विवेक - काठमाडौं / राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र खोसेर पञ्चायत शासन शुरु भएको छेक ! राणा शासन अन्त्यसँगै शुरु भएको प्रजातन्त्रको स्वाद गाउँ सम्म नपुग्दै निर्दलीय ब्यवस्था शुरु भए पनि अधिकाँश...
- विष्णु विवेक / काठमाडौ - शिक्षक कक्षा कोठामा किन जान्छन् ? जवाफ छोटो छ – पढाउन । विद्यार्थीलाई पढाउन नपाए वेचैन हुने शिक्षक कति होलान् त ? यसको जवाफ पहिलो प्रश्न जत्तिकै सपाट र स्पष्ट फेला पा...
- विष्णु विवेक / ‘हिसाब’ भन्ने वित्तिकै ‘पिसाब’ आउँछ ! उखान कै रुपमा स्थापित भै सकेको छ यो भनाई । विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा एसएलसीमा मात्रै हैन उच्च माध्यामिक तहका परीक्षाफलको तथ्याङ्क विश्ल...
- कृष्ण अधिकारी / राधेश्याम यादवको जागिरावधी सकिन अब ४ वर्ष बाँकी छ । पछिल्लो ३० वर्षको अवधी उनले कक्षा कोठा र विद्यार्थीसित बिताए । अहिले बर्दियाको जानकी माध्यामिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवा...
पक्कापक्कीजस्तै थियो, शिक्षक नभएको भए होमबहादुर कुँवर यतिखेर रिटायर्ड सेनाको जीवन बिताइरहेका हुन्थे । सैनिक पृष्ठभूमिको कुँवर परिवारबाट एकाएक बदलिएर शिक्षक बने । ४३ वर्ष ९ महिना केटाकेटी, शिक्षक र समु...
भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या भएकै दिन प्युठानका श्यामबहादुर बुढाले गोर्खा सैनिकमा नियुक्ति पाए । घटनाले संसार तरंगित थियो, उनी सैनिक पोशाकमा सपथ लिदै थिए । त्यो थियो ३१ अक्टुबर १९८४ को...